नशामा मात्तिएका सञ्जय दत्तले अमिताभको पार्टीमा हंगामा गरेपछि…
सोमबार, फागुन ७, २०७४
एजेन्सी, कात्तिक १
बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता सञ्जय दत्तको नशाको लतबारे प्राय सबै परिचित छन्। सञ्जयले नै कतिपटक आफ्नो नशाको बारेमा सबैसामु स्वीकार गरेका छन्। उनलाई पार्टीको पनि एकदम सौख छ। जेलमा ६ वर्ष विताएर बाहिर आएपनि उनी पार्टीको लागि सधैं तयार हुन्छन्।
पार्टीबाट उनी नशामा मात्तिएर बाहिर आएको तस्वीरहरु पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन्। उनी पार्टीमा रमाइलो मात्र गर्दैनन्। पार्टीमा उनी हंगामा गर्ने र अनेक दृश्य सृजना गर्न पनि माहिर छन्। अघिल्लो वर्ष उनी एक पार्टीको विषयमा निकै चर्चित भएका थिए।
खासमा अघिल्लो तिहारमा अभिनेता अमिताभ बच्चन परिवारले आयोजना गरेको तिहारको पार्टीमा सञ्जयले निकै हंगामा गरेका थिए। उनी पार्टीमा पुग्दा नै रक्सीले मातेका थिए। मातेर पार्टीमा पुगेका सञ्जय आफ्नो खुट्टामा पनि उभिन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यहाँ उनले निकै हंगामा मच्चाएका थिए।
उनको यस्तै रक्सीको लतले आज पनि एउटा अर्को घटना यादगार छ। सञ्जय दत्त श्रीदेवीको ठूलो फ्यान थिए। जब उनले श्रीदेवी जीतेन्द्रसँग फिल्म ‘हिम्मतवाला’ को शुटिङमा आइरहेकी छन् भन्ने जानकारी पाए सञ्जय श्रीदेवीलाई हेर्न पुगे। शेटमा श्रीदेवीलाई नदेखेपछि नशामा धुत्त सञ्जय श्रीदेवीको चेन्जिङ रुममै पुगे। सञ्जयलाई आइरहेको देखेपछि श्रीदेवीले कोठाको ढोका लगाउनुपरेको थियो।
पार्टीका शौखिन सञ्जयलाई उनको श्रीमती मान्यताले पनि निकै ख्याल राख्छिन्। उनी पनि पार्टी गर्न रुँचाउछिन् र पार्टी होस्ट गर्छिन्। सञ्जयको घरमा कोही पाहुना आएपनि उनी पाहुनाको सत्कार पार्टीको शैलीमा गर्ने गर्छिन्।
पछिल्लो समयपनि नशाको हालतमा सञ्जयले अभिनेता रणवीर कपूरलाई उल्टो उल्टो बोलिदिएका थिए। उनले रणवीरको लागि एउटा फिल्म निर्माण गर्ने बताएका थिए। उत्तरमा रणवीरले हुन्छ भनेका थिए। त्यसपछि सञ्जयले फिल्मको नाम लड्डु राख्ने बताउँदै जाँदा इमरती , जेरी, पेडा नामको फिल्म बनाउँछु भनेपनि त्यहाँ सबै चकित परेका थिए।
त्यसपछि सञ्जयले भनेको थिए,‘मैले तिम्रो फिल्म बर्फी देखेको थिए टीभीमा, कस्तो नाम राखेको बर्फी? मेरो बायोपिकमा खेल्ने मान्छेलाई बर्फी जस्तो फिल्ममा खेलाउने भन्दै सञ्जय उफ्रिएका थिए।
त्यसपछि त्यहाँको माहोल केही विग्रिएको थियो।
सञ्जयलाई रक्सी र ड्रग्सको नशाबाट उम्काउन पुर्नस्थापना केन्द्रमै राख्नुपरेको थियो। उनको यो समस्याबाट उनको बुवा सुनील दत्त पनि हैरान भएका थिए।
सञ्जयले बलिउडमा ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’, ‘लगे रहो मुन्नाभाई’, ‘बास्तव’ जस्ता हिट फिल्म दिएका छन्।
हालै उनको फिल्म ‘भूमि’ रिलिज भएको थियो
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १, २०७४ ०५:३५:५८
दुश्मनी अझै जारी: सलमानले फेरि अर्जितको गीत हटाउन लगाए
सत्यजित रे का हेर्नैपर्ने पाँच उत्कृष्ट सिनेमा
‘लेडी’ अमिताभ बच्चन: ‘जेन्टलम्यान’ दीपिका पादुकोण
करनी सेनाले फिर्ता लियो ‘पद्मावत’ विरूद्धको आन्दोलन
दिपिका पादुकोण र इरफान खान नेपाल आउने
अभिनेत्री जिन्नतले व्यापारी विरूद्ध दिइन् दुर्व्यवहारको उजुरी
‘वाह रे मजा, चार पैसामा बाह्रै मज्जा’
प्रत्यक्षमा बाँचुञ्जेल लड्ने, समानुपातिकमा दोहोर्‍याउन नहुने?
फेसबुकमै अल्झिएको हाम्रो उर्जा
परिवर्तनका लागि सँगै युद्व लडेका कार्यकर्ताहरू कहिलेसम्म खाडीमा?
‘भ्यालेन्टाइन डे’ कसरी मनाउने?
सुनिल मणी दाहाल
समीक्षा : नथिया
घरदेश र आमा
जहाँ अहंकार हुन्छ त्यहाँ प्रेम मौलाउन पाउँदैन